किन गर्नु हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह ? यस्ता छन् कारण – List Khabar
Home / समाचार / किन गर्नु हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह ? यस्ता छन् कारण
किन गर्नु हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह ? यस्ता छन् कारण
admin February 6, 2022 समाचार Leaveacomment 93 Views
काठमाडौँ । हिन्दू धर्मले सहगोत्रीका बीच विवाह गर्न नहुने विधान गरेको छ । गोत्र भनेको वंश र कुल हो । प्रत्येक नयाँ पुस्तालाई गोत्रले जोड्ने काम गर्छ । जस्तो, कसैको भारद्वाज गोत्र छ भने त्यो व्यक्ति भरद्वाज ऋषिको कुलमा जन्मेको हो ।
विवाहमा गोत्रविचार अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । वेदपुराणहरूमा उल्लेख हुने सप्तऋषिका सन्तान नै उक्त गोत्रधारी हुन्।विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ र कश्यप सप्तऋषि हुन् ।
यसमा अगस्त्य ऋषिको नाम पछि जोडिन आउँछ । यिनै ऋषिका सन्तान दरसन्तान हामी हौं । दुई व्यक्तिको गोत्र एकै छ भने त्यसको अर्थ उनीहरू एउटै कुलमा जन्मेका हुन् । यसरी उनीहको पारिवारिक सम्बन्ध हुन्छ ।
कुन गोत्रको सँग विवाह गर्ने भन्ने विषयमा फरक मान्यता छन् । हिन्दू धर्मका अनुसार मानिसले तीन गोत्र छोडेर विवाह गर्नुपर्छ स् आफ्नै गोत्र, आमाको गोत्र र हजुरआमाको गोत्र । कोहीकोही चाहिँ मावलको हजुरआमाको गोत्रमा पनि विवाह गर्नु हुँदैन भन्छन्।
महान् सन्त ओशोले पनि विवाह जति टाढाको गोत्रसँग हुन सक्यो त्यति राम्रो हुने बताउनुभएको छ। यस्ता दम्पतीको सन्तान गुणी र प्रभावशाली हुन्छन्।
Previous भोलिदेखि काठमाण्डाैबासीहरूका लागि आयो यस्तो खुशीकाे खबर
Next अफ्रिकाबाट उडेको विमानको पाङ्ग्रामा लुकेका व्यक्ति नेदरल्यान्ड्समा जीवितै भेटिए